WARBIXIN: Ugu dambeyn Trump iyo Kim Kim Jong Un oo kulmay Singapore
WARBIXIN: Ugu dambeyn Trump iyo Kim Jong Un oo ku kulmay Singapore
SINGAPORE- Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegey in xiriir wanaagsan la sameyn doono dhigiisa Kim Jong Un bilowga wadahadalada ku dhexmari doona Singapore. Wadahadaladaan ayaa inta ay socdaan diirada saari lahaa khatarta hubka Nukliyeerka.
Hadii wadahadalka maanta u bilowdey labadaan dal guuleysto waxay sababeysaa in nabad ka dhacdo Woqooyi Barri ee dalalka Asia taasoo lamid noqoneysa booqashadii Madaxweyne Richard Nixon ku tagey dalka China 1972.
”Waxaa jiri doona caqabado,” sidaas waxaa yiri Kim, balse waxaa uu wacad ku marey in uu la shaqeyn doono Trump iyagoo horfadhiya calamada labada dal.
Labadaan hogaamiye ayaa muddo 40 daqiiqo kulan gaar ah qaatey kadib markii banaanka uga soo baxeen qolka shirarka ee Hotelka ay dagan yihiin waxay u gudboon halka loogu talagalay iney kulan guud kula qaataan dhinacyada wafdiga ka kooban yahay.
Waxaa la maqley iyadoo laga tarjumayo Madaxweynaha Woqooyiga Kuuriya oo leh “ waxaan u maleynayaa in aduunka oo dhan na daawanayo, kuwa badan waxay u maleynayaan muqaalkaan inuu lamid yahay iyagoo fiirsanaya filin aan run aheyn.”
Madaxweynaha Mareykanka oo la waydiiyey sida wadahadalkooda ahaa ayaa sheegey inuu aad u fiicnaa.u
” Waxaan ka gudabney tuhunkii saarnaa in kulankaan qabsoomo, waxaan u maleynayaa in talaabadaan tahay mid amniga caalamka u wanaagsan.” Sidaas waxaa yiri Madaxweyne Fonald Trump.
Trump ayaa safarka Singapore waxaa ku weheliya Xoghayihiisa arimaha dibada, la taliye dhinaca amniga John Bolton iyo agaasimaha guud ee aqalka Cad John Kelly halka Kim wafdigiisa ay kamid yihiin nin horey madax uga ahaa ciidamada sirdoonka Kim Yong Chol, Wasiirka arimaha dibada Ri Yong Ho iyo Ri Su Yong ku xigeenka gudoomiyaha xisbiga talada dalka haya.
Diyaaradda Trump Air Force One ayaa ku hakatay dalka Qadar, halkaasi oo la sheegay in...
Caalamka 27.05.2018. 09:20
Shinzo Abe oo mudo dheer sii maamuli doona Japan
Caalamka 20.09.2018. 16:35